वि.सं. २०७६ माघ ३, राशिफल | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
वि.सं. २०७६ माघ ३, राशिफल
प्रकाशित मिति ३ माघ २०७६, शुक्रबार ०८:४७ लेखक नेपाली जनता
वि.सं. २०७६ माघ ३। शुक्रबार। इ.स. २०२० जनवरी १७। ने.सं. ११४० पोहेलागा। माघ कृष्णपक्ष। सप्तमी, ११:०९ उप्रान्त अष्टमी।
प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् र मनग्गे लाभ हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुनेछ। परिस्थितिको अनुकूलताले प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। पुरुषार्थी काम सिद्ध गर्ने समय छ। साँझतिर प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ।
काममा अलमल हुनेछ भने प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखापर्नेछ। अस्वस्थताले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। सेवामूलक कामले अघि बढ्न मद्दत पुग्नेछ। परिस्थितिले समस्या निम्त्याए पनि मिहिनेत गर्दा फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। समय लागे पनि साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ। मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। प्रतिस्पर्धाबाट लाभ मिल्नेछ।
Geminiनियमित काम सम्पादन भए पनि पारिवारिक मतभेदले व्यवधान निम्त्याउनेछ। बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले सजग रहनुपर्ला। निर्णय लिन केही अलमल भए पनि साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। पछि लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला।
साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले पनि उत्साह जगाउनेछ। व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्। कामको उच्च मूल्यांकन हुनेछ भने लगनशीलताले विशेष अवसर दिलाउनेछ। रोकिएका काम बन्नुका साथै नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। साँझतिर काम बिग्रने भयले सताउन सक्छ, लेनदेनमा होसियार रहनुहोला।
प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिनेछ। बोली–व्यवहारमा अलि सजग रहनुपर्ला। सावधान नहुँदा हातबाट लक्ष्मी बाहिरिने सम्भावना देखिएकाले कर्जा र उधारो व्यापारमा चनाखो रहनुपर्नेछ। नियमित काममा साबिकजस्तै फाइदा भइरहनेछ। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला। साँझतिर आयस्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम सुरुवात हुनेछ।
आगन्तुकहरूले अलमल्याए पनि प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। बाहिर आलोचना गर्नेहरूले व्यवहारमा अवसर प्रदान गर्नेछन्। साँझतिर विवादास्पद जिम्मेवारी आइपर्ला। अवसर आए पनि ठूलो उपलब्धि नहुन सक्छ।
अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका हुनेछ। भैपरी आउने काममा खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। खर्च लागे पनि लामो यात्रा सम्भावना छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढाउने समय छ। साँझतिर आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ।
पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम बन्नेछ। अर्थअभाव खट्किए पनि आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुट्नेछ। प्रयत्न गर्दा प्रतीक्षा गरिएको काम बन्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। साँझतिर खर्चको जोहो गर्न कर्जा लिनुपर्ला। धनमाल बाहिरिने समय रहेको हुँदा सतर्कता अपनाउनुहोला।
प्रयत्न गर्दा राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ। रोकिएको काम बन्नेछ भने जिम्मेवारी बढ्न सक्छ। व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। विशेष भेटघाटले काममा उत्साह बढाउला। अरूलाई प्रभावित पारेर फाइदा उठाउने समय छ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक दायित्व हातलागी हुनेछ। साँझतिर श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ भने प्रतीक्षा गरिएको लाभांश पनि प्राप्त हुनेछ।
परिस्थितिवश विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा थकान महसुस हुनेछ। अरूको बारेमा चासो लिँदा व्यर्थै झमेला बढ्न सक्छ। उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। चुनौती देखिए पनि स्थितिलाई सहज बनाउन सकिनेछ। साँझतिर शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले आँटेको काम बन्नेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम हातपार्न सकिनेछ। (नेपाली पात्रो)
कामको चाप बढ्नेछ भने एक पटक बनिसकेको काम फेरि दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। अवसरको खोजीमा निकै दौडधुप गर्नुपर्ला। शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ हुनेछ। अप्ठ्यारो स्थितिमा धैर्यले काम लिने चेष्टा गर्नुहोला। साँझतिर शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले लक्ष्यमा पुगिनेछ।
साथीभाइको आगमनले काममा हौसला जाग्नेछ। रमाइला ठाउँको भ्रमण गर्ने अवसर जुट्नुका साथै आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुने समय छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउन सक्छ। मनग्गे अर्थ लाभ पनि हुनेछ। दिन मनोरञ्जनपूर्ण र उत्साहवर्द्धक रहनेछ। साँझतिर स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिनाले चिताएको काम अवरुद्ध बन्न सक्छ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित मर्यादा क्रमबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र ‘आउट’
काठमाडाैं । सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘आउट’ गरिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित राष्ट्रिय मर्यादा क्रममा राष्ट्रपतिदेखि…
सेतक चिनीको छुट पुर्जी रोकियो
जाजरकोट । समयमा निकासी पुर्जी नपाउँदा करीब नौ करोडको सेतक चिनी जाजरकोटमै थन्किएको छ । प्रति क्विन्टल ६० हजारमा…
नेपाली सेना चीन, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग सैन्य अभ्यास गर्दै
काठमाडाैं । नेपाली सेनाले चीन, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ । बिम्स्टेक मुलुकका सेनाप्रमुखको…
हरीयाली राजधानीः ४७ किलोमिटर क्षेत्रमा वृक्षरोपण, पहिचान भएको रुटमा असारदेखि वृक्षरोपण !
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरको सौन्दर्य कायम गर्न महानगर क्षेत्रका मुख्य सडकमार्गमा वृक्षरोपण गर्ने भएको छ ।
वनस्पति विभाग, वन…
बेहुला नभएको त्यो विहे
न्युयोर्क । त्यो विवाहका बेहुला केन्डल मुर्फीको ९ महिनाअघि दुर्घटनामा निधन भयो । बेहुली जेसिका प्याडगेट आफ्नो विवाह पहिरनमा…
दुर्घटनाका घाइतेलाई प्रवासीको सहयोग
बहराइनको बुकामत कम्पनीमा कार्यरत रहँदा आगलागीमा परेर घाइते भएका तिलिजाको उपचारका लागि म्याग्दी उद्धार समिति बहराइनले रु एक लाख…
कोरोनाभाइरसः क्वारेन्टाइनका लागि ल्याइएका मानिसहरू सवार बसमा युक्रेनमा प्रदर्शनकारीबाट आक्रमण
शिवरात्रिमा नागाबाबा : महिलालाई पशुपतिनाथ गइनसक्नु !
आज महाशिवरात्रि, पशुपतिलगायतका शिवालयमा दर्शनाथीको भीड
बालकोटमा बोले बाँस्कोटा, ‘सातवटा जोडेर अडियो बनाएको होला…’
महासेठविरुद्ध अनियमियता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
लेखापालसँग मिलेर प्रहरीको तलब, रासनलगायतको बजेट हिनामिना
‘आँगनमा लास भए पनि किस्ता नलिई जान्नौँ भने’
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 23 views
४४ हजार नेपाली बस्ने कोरियामा कोरोनाको त्रास,कामदारहरुको सुरक्षाका लागि दूतावासको तयारी 15 views
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 15 views
काठमाडौंमा घर बनाउन कति खर्च लाग्छ ? 14 views
ब्लु फिल्म खेलेर जमेका नेपाली युवतीहरू 10 views
सेक्स गर्ने चाहना हुँदा युवतीले कस्तो संकेत देखाउछन् ? जान्नुहोस। 8 views
बाँस्कोटा प्रकरणमा अडियो लिक गर्ने मिश्रविरुद्ध साइबर क्राइमको उजुरी 8 views
यस्तो छ , सेक्स गर्दा छोरा वा छोरी हुने साइत 8 views
यौनसम्पर्क गर्दा महिलालाई यसरी मिल्छ सन्तुष्टि6views